Madaxweyne Hassan sheikh oo maanta xilka kala wareegaya Madaxweynihii hore ee Dalka Maxamed Abdullaahi Farmaajo. | Somali National Television - sntv.so
Home VILLA SOMALIA Madaxweyne Hassan sheikh oo maanta xilka kala wareegaya Madaxweynihii hore ee Dalka...
Waxaa maanta lagu wadaa in xarunta Madaxtooyada Soomaaliya Xilalka ku kala wareegaan Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo 15-kii Bishaan lagu doortay Teendhada Afisiyooni iyo Madaxweynihii hore ee xilka kasii dagaya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Xafladda xil wareejinta ayaa lagu wadaa in goordhaw bilaabato waxaana Lagu wadaa in ay Ka Qeybgalaan Madaxweynayaasha xilalka isku wareejinaya, Guddoonka labada Aqal, Taliyeyaasha Ciidamada, Xildhibaannada iyo Golaha Wasiirada iyo marti sharaf kale oo aad u badan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha xilka kasii degaya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbado koo kooban ka jeedin doona munsaabadda xil wareejinta iyo xubnaha kale ee lagu marti qaaday.
Madaxweynaha xilka kasii degaya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa la doortay 8-dii Bishii Febaraayo ee sanadkii 2017-kii waxaana uu xilka haayay in ka badan 5 Sano.
Previous articleWasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka XFS oo Muqdisho ka furtay shir socon doona muddo 3 maalmood ah.
Next articleSuuriya oo qubaro miinooyinka sameeya u dirtay Ruushka